Ngaba abathengisi bangawanyusa njani amaPhulo eKrisimesi aShukumayo okuNyusa iNgeniso | Martech Zone
Babathengisa njani iiPhulo leKrisimesi eliSelfowni kwiNyuso yeNgeniso
NgoMvulo, nge-1 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
Eli xesha leKrisimesi, abathengisi kunye namashishini banokunyusa ingeniso ngendlela enkulu: ngentengiso eshukumayo. Okwangoku, kukho i-1.75 yezigidigidi zabanikazi be-smartphone kwihlabathi liphela kunye ne-173 yezigidi e-US, ebala i-whopping ye-72% yentengiso yefowuni eNyakatho Melika.
Ukuthenga kwi-Intanethi kwizixhobo eziphathwayo kutshanje kugqibe idesktop okokuqala kwaye iipesenti ezingama-52 zokundwendwela iwebhusayithi ngoku zenziwa ngefowuni ephathekayo. Nangona kunjalo, ixesha lokuhlala kwabathengi kumanyathelo okuthengisa anje nge-imeyile kunokuba yimizuzwana nje emithathu. Ukuqonda amava omsebenzisi oselfowuni kubaluleke kakhulu kubathengisi ukuze bandise imizamo yentengiso kunye nokunyusa ukuthengisa ngexesha leholide.
Ngokubeka iselfowuni kwiziko lesicwangciso se-omni-channel, abathengisi kunye neempawu ziya kwenza inqanaba elitsha lokunxibelelana, ukubandakanyeka, incoko kunye nokunyaniseka. Nengeniso. FitForCommerce
ISmartFocus ibonelela ngengcaciso ethile kuyo Iingcebiso zokuThengisa ngeSelfowuni kubathengisi kunye namashishini. Nantsi inyonyoba kwi-5 yeengcebiso zokuthengisa zenkampani.
Yandisa iselfowuni -I-30% yabathengi abahambahambayo bayishiya intengiselwano yamava abo omsebenzisi ayenzelwanga isixhobo sabo esiphathwayo. Qinisekisa ukuba ii-imeyile zakho zijongeka zintle kuwo onke amaqonga.
Thatha iakhawunti Ixesha, indawo ekuyo, kunye nokuFikelela kwabaThengi bakho -Qonda ukuba nini, phi, kwaye basondele kangakanani abathengi bakho abahambahambayo xa bekhangela. Uya kumangaliswa ukuba bangaphi abathengi onokubatsalela ngokusekwe kwintengiso kubathengi ngokusekwe kwezi zinto zilula, ekuvumela ukuba usebenzise olona phulo lwakho kwaye ekugqibeleni wandise ukuthengisa.
Thintela Ukubonisa kunye nokuququzelela ukuCocwa kweWebhu Igumbi lokubonisa lingaphantsi kokufanelekileyo xa kufikwa kwintengiso yentengiso ngeeholide. Igumbi lewebhu (ekwabizwa ngokuba yi Ukubonisa kwakhona), kwelinye icala yinto eyenzekayo xa abathengi bephanda iimveliso kwi-intanethi ngaphambi kokuya evenkileni ukwenza ezo zinto zithengwayo. Ngokwe-Forrester Research, ukugcotshwa kwewebhu kuya kukhokelela kwi-1.8 yezigidi zeerandi kwintengiso ngo-2017, ngelixa ukuthengiswa kwe-ecommerce kufanele kufikelele kwi-370 yezigidigidi zeedola kwakuloo nyaka; ukugcinwa kwewebhu kulapho abaphumeleleyo bexesha elizayo bezevenkile baya kulawula. Kubalulekile ukwenza inkuthazo kubathengi ukuba bangene kwivenkile yakho kwaye bathenge iimveliso zakho endaweni yokuzifumana kwi-Intanethi ngexabiso eliphantsi kwiwebhu.
Yenza ukukhangela ngeSelfowuni kube lula -I-57% yabathengi abahambahambayo bayayishiya indawo yakho ukuba kufuneka balinde imizuzwana emithathu ukuba iphepha lilayishwe. Ngapha koko, lonke i-100 leemilisecond elonyukayo ngexesha lomthwalo linciphisa ukuthengisa nge-1%. Qinisekisa ukuba amaphepha akho alayishwa ngokukhawuleza kwaye ayenzelwe ukufikelela kwiselfowuni.
Phumeza iBeacon Technology - ukuthengisa kufutshane Idlala indima entsha ebalulekileyo ekuvaleni kwintengiso ye-Intanethi nangaphandle kweintanethi ngokusebenzisa itekhnoloji yokucebisa kwangaphambili eyenza imiyalezo yokuthengisa ibonakale kubasebenzisi ngabanye ngokusekwe kwindawo yabo, indlela yokuziphatha yokuthenga kunye nomzimba, kunye nomxholo wezigqibo abanokuthi bazithenge. I-SmartFocus iyinkokeli kwitekhnoloji ye-beacon kwaye iyisebenzisa ukubonelela ngolwazi olunzulu kumxholo kubathengi bayo.
Ukuqonda okupheleleyo, qiniseka ukutyelela iSmartFocus ' Iingcebiso zokuThengisa ngeSelfowuni kubathengisi kunye namashishini.
tags: iteknoloji beaconIkrisimesi ephathekayoulungiselelo lwefowuniuphendlo lweselfowuniukuthengisa kufutshaneUkubonisa kwakhonaukubonisailumkeintengiso yefowuni ye-smartfocusIgumbi lewebhu